HomeCameras and EquipmentPortrait ဓါတ်ပုံဆရာတွေအတွက် အကောင်းဆုံး မှန်ဘီလူး ၈ လုံး
ဓါတ်ပုံပညာရဲ့ အရေးကြီးဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုပြောကြစတမ်းဆိုရင် မှန်ဘီလူးတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူပုံရိုက်တဲ့ဓါတ်ပုံဆရာတွေ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောနေတာကို ကြားဖူးကြမှာပါ။
ဓါတ်ပုံဆရာရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆ၊လိုအပ်ချက်နဲ့ ငွေကြေးဘယ်လောက်တတ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်အခြေခံပြီး အသင့်လျော်ဆုံး မှန်ဘီလူးကို ရွေးချယ်ဖို့ အများစုက လက်ခံထားကြပါတယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ Review တွေ ဖတ်ရှုပြီး နောက်မှာတော့ Portrait ဓါတ်ပုံပညာအတွက် နာမည်အကျော်ကြားဆုံး မှန်ဘီလူး ၈ လုံးကို ရွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အောက်ပါဖော်ပြထားတဲ့စာရင်းမှာတော့ Wide Angle, Normal, short telephoto နဲ့ telephoto မှန်ဘီလူးတွေပါဝင်ပြီး သင်နဲ့ သင့်လျော်မည့် မှန်ဘီလူးကို ငွေကြေးအခြေအနေ၊ ကင်မရာအမျိုးအစားနဲ့ focal length ဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုတာ စိစစ်ပြီး ရွေးချယ်လို့ရအောင် စာရင်းပြုစုပေးထားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ prime lens နဲ့ zoom lens တွေရဲ့ ကွာခြားမှုကို ခပ်မြန်မြန်လေးရှင်းပြပြီး ဘယ်မှန်ဘီလူးက Portrait အတွက် ပိုပြီးသင့်တော်လဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ကဲစလိုက်ရအောင်….
Prime Lenses နဲ့ Zoom Lenses
Prime Lens တွေမှာ Focal Length ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အားနည်းချက်ပြီး Zoom Lens တွေမှာတော့ Focal length ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာ ပြောင်းလဲခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အလွယ်တကူပြောရရင် Zoom ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုပါတော့။ ဘာလို့လဲ? Prime lens တွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Lens element တွေကို လျှော့ပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Zoom lens တွေကတော့ အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့မရတဲ့အတွက် တခါတရံမှာ ဈေးကြီးလေ့ရှိပါတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့ prime lens တွေလဲရှိပါတယ် ချွင်းချက်ပါ။
Prime lens တွေကို focal length အသေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် သူတို့က ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေက Zoom lens ကထွက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေထက် ဈေးနှုန်းချင်းတူတဲ့မှန်ဘီလူးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ပိုပြီးကောင်းမွန်ပါတယ်။ Zoom lens တွေကထွက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေရဲ့ ပြတ်သားမှုက တခါတလေမှာ Zoom Lens ကြောင့် ထောင့်စွန်းတွေမှာ လျာ့ကျသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Aperture ကလည်း ပုံမှန်ဆိုရင် Zoom Lens မှာ အသေမဟုတ်တဲ့အတွက် Zoom ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီးတောင် လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
MakeUseOf.com ရဲ့ အန်ဒီဘတ်ထ်စ်က ရှင်းပြထားတာဒီလိုပါ ” Prime Lens တွေ ရဲ့ Aperture က Zoom lens တွေထက် ပိုပြီး ကျယ်ပါတယ်။ သဘောကတော့ အလင်းရောင်နည်းတဲ့အချိန်တွေမှာ၊ DOF ကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့အချိန်တွေမှာ၊ Subject ကို နောက်ခံနဲ့ ခွဲပြချင်တဲ့အခြေအနေမှာ ပိုပြီးကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်တယ်လေ”။
အထူးသဖြင့် လူပုံပဲရိုက်ကူးတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာ အများစုကတော့ Prime lens တွေက သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာ ထောက်ခံပေးသလိုပဲ Zoom lens က တခါတလေမှာကောင်းတယ်လို့လဲပြောကြပါသေးတယ်။ Zoom lens မှာ အထူးသဖြင့် OIS (Optical Image Stabilization) နဲ့ IS (Image Stabilization) ပါဝင်ကြတဲ့အတွက် Shutter နှေးနှေးနဲ့ရိုက်မိသွားရင်တောင် ကင်မရာလှုပ်မိသွားလု့ိဖြစ်သွားတဲ့ ဓါတ်ပုံဝါးဝါးတွေ ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလန်းနည်းပါးစေပါတယ်။
ဓါတ်ပုံဆရာအများစုလက်ခံထားတာက Standard သို့မဟုတ် telephoto မှန်ဘီလူးတွေက လူပုံရိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုကြပေမယ့် အချို့သော ဓါတ်ပုံဆရာတွေကတော့ Wide Angle မှန်ဘီလူးတွေကိုအသုံးပြုပြီး ကွဲပြားတဲ့ လူပုံတွေရိုက်နေကြတုန်းပါပဲ။ Wide Angle သို့မဟုတ် မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူးတွေက ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင်မသုံးသင့်တာအမှန်ပါဘဲ ၊ ပုံထဲမှာပါတဲ့ လူရဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်းတွေ သို့မဟုတ် မျက်နှာအနေအထားတွေ မမှန်တာမျိုးက မှန်ဘီလူးနဲ့ subject နီးလေပိုပြီးဖြစ်လေ မို့လို့ပါ။ သို့သော်လည်း လူပုံတွေကို အဆောက်အဦးကြီးတွေ နောက်ခံထားတာမျိုး အဝေးကရှုခင်းတွေပါအောင် ရိုက်တာမျိုးတွေမှာတော့ ဒီမှန်ဘီလူးတွေက ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူးတွေက သိပ်များများစားစားမရှိပါဘူး။
Canon 16-35mm f/2.8L II USM Lens: ခင်ဗျားမှာ full frame ကင်နွန်ကင်မရှာရှိခဲ့ရင်တော့ ဒီမှန်ဘီလူးက အကောင်းဆုံး မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူးဆိုတာငြင်းလို့မရပါဘူး။ Aperture က အကျယ်ဆုံးအဖြစ် ၂.၈ အထိဖွင့်လို့ရပြီး တိကျမှုနှုံးမြင့်မားတဲ့ Asperical Lens elements ၃ ခုတောင်ပါဝင်လို့ သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aperture ring တစ်ခုလဲပါဝင်လို့ Aperture ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီး နောက်ခံကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဝါးအောင် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
Nikon 14-24mm f/2.8 AF-S Lens: ဒီမှန်ဘီလူးက တကယ့်ကို မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူးအစစ်မို့လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသားပေးတဲ့ လူပုံတွေရိုက်ရင်အသုံးဝင်ပြီး တမူထူးခြားတဲ့ပုံတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ Filter တွေဒီမှန်ဘီလူးမှာအသုံးပြုဖို့ခက်ပေမယ့်လည်း ဒီမှန်ဘီလူးကတော့ Landscape မှန်ဘီလူးသမိုင်းမှာအကောင်းဆုံး မှန်ဘီလူးဖြစ်ပါတယ်။
Tokina 11-16mm f/2.8 lens: ဒီမှန်ဘီလူးကတော့ မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူးတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ ဈေးအသက်အသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Aperture ကျယ်ကျယ်နဲ့ မြန်မြန်ရိုက်လို့ရတဲ့ မှန်ဘီလူးက အခြားမှန်ဘီလူးတွေနဲ့ မတူစေတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အထူးသဖြင့် ဈေးသက်သာတာက က အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီမှန်ဘီလူးထုတ်လုပ်သူက SONY, Canon နဲ့ Nikon တို့အတွက်ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။
Full frame ကင်မရာတစ်လုံးအတွက် 50mm လို့ပြောလိုက်ရင် သာမန် မှန်ဘီလူးတစ်လုံးလို့မှတ်ယူလို့ရနိုင်သလို APS-C ကင်မရာတွေအတွက် 35mm နဲ့ Micro four-third ကင်မရာတွေအတွက် 25 mm တို့ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှန်ဘီလူးတွေက Wide angle မှန်ဘီလူးတွေနဲ့ short telephoto မှန်ဘီလူးတွေကြားက ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ပေးထားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။
အကောင်းဆုံး သာမန် မှန်ဘီလူးတွေက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြပါတယ်။
Canon EF 50mm f/1.8 USM Lens: ဈေးလက်လှမ်းအမှီဆုံးမှန်ဘီလူးတစ်လုံးဖြစ်ရုံမကပါဘူး အရည်အသွေးပိုင်းရော ပြောစရာသိပ်မရှိလှပါဘူး။ Portrait ဓါတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ စိတ်ကြိုက်မှန်ဘီလူးတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့သော်ငြားလည်း Canon က ဒီမှန်ဘီလူးထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Amazon မှာ ခုချိန်အထိ ဆက်လက်ပြီး ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
Nikon 50mm f/1.8G AF-S Lens: Nikon ရဲ့ နာမည်ကျော် 50mm f/1.8D မှန်ဘီလူးကို အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ ဒီမှန်ဘီလူးမှာ မော်တာသံတိုးလာတဲ့အပြင် မှန်ဘီလူးအရည်အသွေးလဲပိုကောင်းလာပါတယ်
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM : 50mm ရှိတဲ့ သာမန်မှန်ဘီလူးစာရင်းထဲမှာမပါပေမယ့်လည်း Portrait ဓါတ်ပုံဆရာတွေကြားမှာ ဒီမှန်ဘီလူးက အသင့်တော်ဆုံးလို့ နာမည်ကြီးတဲ့အတွက် ဒီစာရင်းထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။
Portrait ဓါတ်ပုံပညာလောကမှာတော့ short telephoto မှန်ဘီလူးတွေက လူပုံတွေအတွက် အကောင်းဆုံး နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး focal length ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Digital Photography School မှ အန်ဒရူး ဂစ်ဘ်ဆင်က ” ခင်ဗျား ရှေ့ကိုတိုးပြီး ပုံရိပ်တွေကို ပုံစံမပျက်စေပဲရိုက်ကူးနိုင်သလို frame ထဲမှာ အရာအားလုံးပါစေဖို့ နောက်ကိုဆုတ်ပြီးရိုက်ကူးလို့ရတယ်၊ မော်ဒယ်နဲ့တော့ စကားပြောဖို့ ခက်သွားတာတော့ရှိတာပေါ့” လို့ပြောထားပါတယ်။
ဓါတ်ပုံဆရာတွေအတွက် အကောင်းဆုံး short telephoto မှန်ဘီလူးကတော့
Canon 85mm f1.8 lens: နာမည်ကျော် ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အန်ဒရူး ဂစ်ဘ်ဆင်ရဲ့ Portrait နဲ့ close up ဓါတ်ပုံတွေအတွက် စိတ်တိုင်းအကျဆုံးမှန်ဘီလူးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 85mm က ကျွန်တော့်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအနားတိုးပြီးရိုက်လို့ရစေတယ်လေ၊ ကျွန်တော်က distortion မရှိတဲ့ portrait တွေပဲရိုက်ချင်ပါတယ်။ မော်ဒယ်ရဲ့မျက်နှာက frame ထဲမှာအပြည့်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ 85mm က distortion မဖြစ်စေပါဘူး။ မော်ဒယ်ရဲ့ကိုယ်လုံးပေါ်ပုံလိုအပ်ရင်တော့ နောက်ဆုတ်ပြီးရိုက်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဖက်ရှင်နဲ့ Portrait ကို ကြေးစားအဖြစ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကြတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတွေ တစ်ခါတစ်လေသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ နောက်ခံနဲ့ မော်ဒယ်ကိုသပ်သပ်စီခွဲထွက်ပြီး ဓါတ်ပုံထဲမှာ ကြွလာစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှန်ဘီလူးတွေက ဈေးကြီးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ငွေကြေးသိပ်မသုံးနိုင်သူတွေအတွက် တချို့သော ဈေးသက်သာတဲ့ မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားထဲမှာလည်းရှိပါတယ်။
အကောင်းဆုံး Telephoto lens က နှစ်လုံးပဲရှိပါတယ်။
Canon EF 70-200mm f/2.8L II IS USM Lens: ဒီမှန်ဘီလူးကတော့ DPReview ရဲ့ ရွှေတံဆိပ်ရထားတဲ့ မှန်ဘီလူးဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဒီ ဝက်စ်လိတ်ထ်က ဒီမှန်ဘီးမှာ အကောင်းဆုံးသောမှန်အရည်အသွေးနဲ့ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်ထားလို့ အကောင်းဆုံးထဲမှာ သရဖူစွဲတာ မထူးဆန်းပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
Nikon 70-200mm f/2.8 VR II Lens: DPReview.com ရဲ့ ရွှေတံဆိပ်ရထားတဲ့ နောက်ထပ် မှန်ဘီလူးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး အန်ဒီ ဝက်စ်လိတ်ထ်က ဒီလိုဆိုပါတယ်၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ရိုက်ကူးရာမှာ ပြဿနာသိပ်မရှိလို့ အချိန်တိုင်းမှာ ခင်ဗျားရဲ့ အလုပ်အတွက် လိုအပ်နေမယ့် အရာတစ်ခုပါတဲ့။
သင့်အတွက်ဘယ်မှန်ဘီလူးက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ? ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Portrait photography အတွက်အသုံးပြုတဲ့ မှန်ဘီလူးအမျိုးမျိုးကို စာဖတ်သူနားလည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားသလိုပဲ ဘယ်မှန်ဘီလူးက ဘယ်နေရာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။
ကိုးကား။ ။Melanie Doncas ရဲ့ The 8 best lens for the portrait photographers ကိုဘာသာပြန်ပါသည်။
3 Comments on Portrait ဓါတ်ပုံဆရာတွေအတွက် အကောင်းဆုံး မှန်ဘီလူး ၈ လုံး